Day: Mee 7, 2020
Ministri ahia na-ekwupụta ọnụ ahịa mkpuchi na ahịa nke mkpuchi
N'ime usoro mkpebi a mere mgbe Nzukọ Mgbakọ a mere na ụbọchị anọ nke ọnwa Mee 4, ebe Onye Isi Ala Recep Tayyip Erdoğan mara ọkwa, a bịara nwee ike ire masks ịsa ahụ n'ụlọ ahịa. [More ...]
Mentskwụ ụgwọ nke TL 39 kwa ụbọchị, ka a kwụọ ndị ọrụ ụgwọ ezumike ụgwọ ọrụ n'ihi coronavirus ma ọ bụ ọrụ ha, ga-amalite itinye ego na Fraịde, Mee 8. Citizensmụ amaala na-adabere na ịnweta ụgwọ ọrụ [More ...]
Ahịa Ugbo Dijitalụ Ga-agba Onye Ọ Bụla ume Ka Ọ Mepụta
Ahịa Ugbo Dijitalụ ga-ahụ ngwa ahịa nke ndị ọrụ ugbo na Digital Agriculture Market, nke ga-eme ka ndị ọrụ ugbo nweta ohere inweta ahịa ahụ. Hayrettin Plane, Onye isi oche nke Aegean Fresh Mkpụrụ na akwukwo nri na-ebu akwụkwọ nri. [More ...]
615 Nde Liras na-enyere aka maka Eskişehir
Nadir Küpeli, Onye isi ala Eskişehir OIZ kwuru, "Mgbakwunye nke itinye ego na ntinye aka na Eskişehir na-abawanye olileanya na atụmanya anyị maka ọdịnihu na uto nke ụlọ ọrụ anyị." Mkpesa nke oru nke ulo oru na teknụzụ nka na isi obodo ọzọ [More ...]
Ebumnuche njem na akụrụngwa na-aga n’ihu n’iru puku saịtị
Mịnịstrị nke hasgbọ njem na akụrụngwa ejirila usoro ahụ nke ọma, na-ewere usoro dị mkpa na nhazi ọ bụla na Ministri Ahụike, ebe ọ bụ na ụbọchị mbụ nke Nje Virus Ọrịa Ọhụrụ pụtara n'ụwa. karịsịa [More ...]
Marmaray Ga-aga Akụkọ Echi Abalị!
Marzọ Mịnịstrị nke Mịnịsta Bosphorus, nke na-enyere ndị njem na-anaghị akwụsị akwụsị na njem ibu n’etiti Eshia na kọntinenti Europe, na-akwado maka ụbọchị akụkọ ihe mere eme ọzọ. Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, Marmaray si Beijing [More ...]
Enwere ike iji ụgbọ ihe eji eme ihe na National Combat Aircraft Prototypes
Onye isi ala nke Republic of Turkey, Onye isi oche nke Defenselọ ọrụ nchekwa. Dr. N'oge a na-ebipụta akụkọ na-ebipụta na akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ, İsmail DEMİR kwuru nkwupụta banyere ngwa ndị a ga-eji rụọ ọrụ na National Combat Aircraft. Onye isi ala DEMİR mere [More ...]
A ga-emepe Lotra Hayrabolu Storey n'okpuruala na 29 Ọktọba
Onye isi obodo ukwu nke Tekirdag Kadir Albayrak mere nyocha na Hayrabolu Multi Storey Underground Car Park, nke a na-arụ na Hayrabolu, ma nata ndị isi site na ndị isi banyere ọnọdụ ọrụ ndị ọhụrụ. Ndị otu Council Council nke Tekirdağ [More ...]
Nsogbu injin nke ALTAY Main Battle tank
Onye isi oche nke Preslọ Ọrụ Nchebe Ndị Isi nke Turkey. Dr. N'oge mgbasa ozi na-ebi ndụ na mgbasa ozi mmekọrịta, İsmail DEMİR metụrụ aka na nsogbu injin nke ALTAY Main Battle Tank. Nkwupụta nke Onye isi ala DEMİR kwuru, “Site na injin nke ALTAY [More ...]
Akwụghachiri nde 6,5 nke PL nye onlọ ọrụ ahụ na Ankara Istanbul High Speed ​​Line!
Ömer Fethi Gürer sitere na CHP jụrụ Minista ofgbọ njem banyere ihe ga-adị 6 nde 398 puku TL, nke a kwụrụ karịa maka onye ọrụ ngo Sigma İnşaat na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project. Onye na-ahụ maka ụgbọ njem Karaismailoğlu, "Ikpe ahụ gara n'ihu" azịza [More ...]
A Kesara Nkpuchi Nlekọta Onwe Onye Nchebe Nye Ndị Ọkwọ ụgbọ njem Ọha na Kahramanmaraş
Ekesara ndị ọkwọ ụgbọ njem ọha na Kahramanmara Public ihe mkpuchi nchebe ihu; N'ime mbọ niile nke igbochi oria ọrịa coronavirus, Kahramanmaraş Obodo ukwu bidoro ikesara ndị ọkwọ ụgbọ ala ọta ọta. Mpaghara Obodo ukwu, yana usoro oria ojoo a [More ...]
Onye ọrụ Liaison mepere maka Project Arụ Ọrụ Nleta
Na Şanlıurfa, nke bụ otu n'ime isi obodo nke okwukwe na njem, e mepere ọfịs njikọ maka 'Culture and Tourism Road Project', nke ga-ejikọ ikike nke Halil-ur Rahman na Eyüp Onye-amụma. Obodo Obodo [More ...]
A ga-arụ ọrụ maka ngabiga karịa maka Sekapark Tram Stop
Obodo Kocaeli, nke mere ka ụgbọ njem dị mfe site na ịnye okporo ụzọ Akçaray maka ọrụ nke ụmụ amaala, mere nmasị maka ndị na-agafe agafe n'akụkụ Sekapark Tram Stop na March. Ije ije na tram [More ...]
E guzobere Board Hygiene Tourism nke İzmir
İzmir nke Obodo Mgbakọ guzobere Njikọ Njem Nleta Anya. Kọmiti ahụ malitere ikpebi usoro ịdị ọcha na nchekwa ka ọrụ ndị njem wee nwee ike ịga n'ihu n'oge usoro ọrịa. President Soyer ọcha ụkpụrụ nke obodo njem a mbụ na Turkey [More ...]
Kedu ihe kpatara ejiri nyefee T-129 ATAK Helicopters?
Onye isi oche nke Preslọ Ọrụ Nchebe Ndị Isi nke Turkey. Dr. N'oge mgbasaozi na-eme mgbasa ozi na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, İsmail DEMİR kọwara ihe kpatara ebugharị nnweta nke helikọpta T-129 ATAK. T-129 ATAK wakpo Helicopter na Tactical Reconnaissance [More ...]
Onye isi oche nke Preslọ Ọrụ Nchebe Ndị Isi nke Turkey. Dr. İsmail DEMİR kwuru nkwupụta banyere National Low Altitude Air Defense Missile System HİSAR-A na National Medium Altitude Air Defense Missile System HİSAR-O. [More ...]
Turkey si ebupụ nke ugbo na ngwaahịa, a ọhụrụ ụdị coronavirus (Kovid-19) ẹkenịmde ke onyinyo nke ọrịa abawanye na January-April oge. Nsonazụ ndị na-ahụ maka ngwa agha agbanyeghị 2,9 N'oge a, ndị na-ebupụ ndị ọrụ ala ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ na ala ala Turkey. [More ...]
Turkey enwezu akpa oge nke Mgba Against Coronavirus
Onye Minista Ahụike Fahrettin Koca kwupụtara nkwupụta na nnọkọ ndị nta akụkọ a na-eme mgbe nzukọ Kọmitii Science Coronary na-enwe na nzukọ ọgbakọ nke Bilkent. N'okwu ya, n'oge ntiwapụ ọrịa ahụ, site na nkwado nke nde mmadụ 83, "ndị agha ahụike" [More ...]
A kwụrụ ụgwọ 7 16 na awa asaa iji ngwa kwụsịtụrụ İmamo'slu nke vomamoğlu
Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu kesara data mbụ banyere “akwụkwọ nkwụchi ụgwọ” site na akụkọ ndekọ aha mmekọrịta ya. Dika data nke İmamoğlu siri kwuwapụta, n'ime awa asaa izizi nke ngwa ahụ, ezinụlọ dị puku iri na isii ka ọ dị mkpa, nde mmadụ abụọ. [More ...]
N'ime afọ atọ gara aga, a kwụọla nde 3 TL dị ka ọnụ ahịa akwụkwọ ikike dị na Ọdụ Eurasia. Iskwụ ụgwọ a na-atụ anya ka ọ bụrụ opekata mpe narị nde anọ n’afọ 470. Sözcü Site na akwụkwọ akụkọ İsmail Şahin [More ...]
Mkpa Turkey İyidere Logistics Center
Hayati Yazıcı, AK Party osote onye isi oche na osote Rize, ya na mmefu ego nke obodo, obughi ihe nlere-mbufe nke ulo ogwu nke Rize City na okpuru mmiri n'okporo mmiri (na mmiri nke Gülbahar District). [More ...]
Ministers Pekcan, Turkey-Europe Business Council n'Ụzọ Kwekọrọ na President nke ọrịa Trading Post
Onye Minista ahia Ruhsar Pekcan mere mkparịta ụka mpaghara na ndị na-ebuga ya na ndị na-enye ndụmọdụ azụmahịa gburugburu ụwa iji gosipụta nsonaazụ ọhụrụ ụdị coronavirus (Kovid-19) na ịkọwa ụzọ maka ihe ngwọta. [More ...]
Pekcan na-agba ndị Council Turkish ume ka ha mee ihe jikọrọ aka iji BTK Line rụọ ọrụ nke ọma
Onye Minista Azụmaahịa Ruhsar Pekcan kwuru na azụmaahịa na ego mba dị iche iche na-eme ka azụmahịa mba ụwa sie ike ma kwuo, "N'oge ntiwapụ ụdị ụdị coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) na oge na-esote, kansụl ime obodo n'etiti mba ndị otu so na Council Council nke Turkey. [More ...]